थियो जान्सेनको सिएरल समुद्र तट पशुहरू | क्रिएटिव अनलाइन
मेलिसा पेरोटा | | कलाकारहरू, छविहरू, प्रेरणा
१ 90 XNUMX ० को दशकदेखि डच कलाकार थेओ जेन्सेनले आफ्नो क्यारियरलाई अविश्वसनीय प्राणीहरू निर्माण गर्न समर्पण गरेका छन्। यी स्व-संचालित मेशिनहरू भनिन्छ "स्ट्रान्डबेस्ट" वा स्पेनिशमा "समुद्र तट पशुहरू"। तिनीहरू समुद्री तटहरू आबाद गर्न र तिनीहरूको हेरचाहमा योगदान दिनको लागि विकसित भएको छ।
यस परियोजनाको साथ, Jansen एक सिर्जना गर्न चाहान्छ कला र ईन्जिनियरिंग बीच फ्यूजन। यस तरिकाले यसले पशुहरूलाई आफ्नो सुसज्जित बनाउँछ वातावरण र आन्दोलन पढ्नको लागि आफ्नै संयन्त्रहरू। अर्कोतर्फ, पशुको आन्दोलनको गतिशीलतालाई उसले आफ्नो काममा पुनरुत्पादित गर्न विस्तृत अध्ययन गर्दछ।
यी ठूला वास्तविक जीवहरू यस्तो तरिकाले डिजाइन गरिएको छ कि तिनीहरू स्वतन्त्र रूपमा सर्दछन् धन्यवाद को लागी हावा प्रणोदन र गतिज ऊर्जा। त्यस्ता संरचनाहरू हिड्ने र जैविक रूपमा सार्ने देखिन्छ, जनावरहरूको चालहरूको नक्कल गर्दै।
उनको गुणहरू सौंदर्यशास्त्र महान विवरण र जटिल को हो। यसको निर्माणले कार्यलाई प्रागैतिहासिक स्केलेटनको रूपमा बुझिन्थ्यो जुन फेरि जीवनमा फर्की आयो र ठीक स्थानको लागि धन्यवाद जहाँ यो बस्दछ जहाँ यो एक प्राप्त गर्छ अत्यधिक वास्तविक अर्थमा.
यद्यपि यी मेशिनहरू जहिले पनि त्यस्ता जटिलताहरू भएका छैनन्। मूल रूपमा, तिनीहरू यस रूपमा सुरू भयो प्राथमिक कंकाल तिनीहरू मध्यमसँग कुराकानी गर्न सक्दैनन्। तर, पछि प्रविधिको एकीकरण विकासात्मक कम्प्युटि,, तिनीहरू वातावरण पढ्न सक्षम हुन थाले। यसैले तिनीहरूले वर्षा, आँधीबेहरी र पानीको उपस्थिति बुझ्न सके। यस तरीकाले तिनीहरू आज कुनै पनि घरपालुवा जनावर झैँ हल्याण्डको समुद्री किनारमा हिँडिरहेका छन्।
1.1 हावाको पेट
जेन्सेनको समुद्री तटबाट जनावरहरू निर्मित छन् लामो पीवीसी पाइप, काठ र फेब्रिक पाल। यी सबै तत्वहरूले वास्तविक शरीरमा मांसपेशीहरू र अंगहरू जस्तै समान कार्यहरू पूरा गर्छन्। यस तरीकाले हामी देख्न सक्छौं कि जनावरहरू बीच कसरी जीवन हुन्छ।
पेट प्रणाली मा आधारित छ मैनबत्तीहरूबाट प्रेस हावा प्राप्त गर्ने पिस्टनहरू टुप्पोमा। तिनीहरूले हावा स collect्कलन गर्दछन् र बोतलहरूमा भण्डार गर्दछन्। एकपटक सबै आवश्यक हावा स collected्कलन गरिएपछि, यो बिस्तारै ट्युब मार्फत पिस्टनहरूमा छोडिन्छ। यसैले पिस्टनले मांसपेशिहरू बढाउँछ.
मांसपेशिहरुमा एक ट्यूब हुन्छ जुन अर्को भित्र रहेको हुन्छ, जुन भित्र र बाहिर जान सकीन्छ। जब हावा बोतलहरूमा प्रवेश गर्दछ सानो पाइपको माध्यमबाट, यो मांसपेशिको भित्री ट्यूबको अन्त्यमा पिस्टनलाई धक्का दिन्छ ताकि ट्यूब लामो हुन्छ। यस्तो कार्यले आन्दोलनलाई अनुमति दिन्छ कि जब जनावर भर एक साथ प्रदर्शन गरिन्छ, यसले हिड्न सक्षम गर्दछ।
मेशिनहरू कुनै पनि प्रकारको इलेक्ट्रोनिक सेन्सरले सुसज्जित छैनन्। यसको विपरित, उनीहरूको वातावरणसँग अन्तरक्रिया गर्न तिनीहरू केवल एक मेकानिज्म प्रयोग गर्छन् जुन गर्न सक्दछ पाइप भित्र पानी को मात्रा पढ्नुहोस्। यस तरिकामा, जब पशु समुद्र किनारको धेरै नजिक छ, यसको बाढीले पाइपहरूले एक मेकानिमेनिसलाई सक्रिय गर्दछ जुन समुद्र तटमा फर्किन्छ। यसको विपरीत, यदि तपाईं भिजेको बालुवाबाट टाढा हट्नुभयो भने, मेकानिमेसन फेरि सक्रिय पारियो चारैतिर घुमाउन।
यहाँ एक भिडियो छ त्यसैले तपाईं अधिक देख्न सक्नुहुनेछ:
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » कलाकारहरू » थियो जान्सेनको असली समुद्र तट जनावरहरू
SheldonThe माछा भन्यो
अविश्वसनीय * ० * मेलिसा साझेदारी गर्नुभएकोमा धन्यवाद
SheldonElPez लाई जवाफ दिनुहोस्